Wararka Maanta: Axad, Aug 12, 2012-Faahfaahin Dheeraad ah oo kasoo baxeyso duqeymihii xalay ka dhacay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose
Maraakiibtan dagaal oo la aaminsanyahay in ay leedahay dowladda Kenya ayaa xalay gantaallo dhowr ah ku tuuray magaalada Kismaayo, kadib markii dagaalyahanno katirsan Al-shabaab ay hubka lidka diyaaradaha ku rideen xilli ay maraakiibtu kusugnaayeen meel udhow marsada caalamiga ah ee magaalada Kismaayo.
Wararkii ugu danbeeyay ee aynu ka heleyno duqeyntii xalay ayaa sheegaya in ay sababtay dhimashada sedex qof iyo dhaawaca Afar kale, kuwaasoo ahaa dad rayid ah oo ay duqeyntu ku haleeshay xilli ay ku sugnaayeen guryahooda.
Sedexda qof ee ku dhimatay duqeynta ayaa la sheegay in ay ahaayeen hal qoys oo daganaa xaafadda V-Afmadow ee magaalada Kismaayo, waxaana qoyskaasi uu madfac ku haleelay gurigooda.
Duqeymaha oo ahaa kuwo xooggan ayaa xaafadaha ugu badan ee ay gaarayeen waxa kamid ahaa xaafadda Isku-filan, V-Afmadow iyo weliba Calanleey, waxaana xilligii ay Maraakiibtu duqeynayeen magaalada la maqlayay guuxa diyaarad jawi sare ku socota oo ku dul wareegeysa magaalada Kismaayo.
Masuuliyiin katirsan maamulka Al-shabaab ee magaalada Kismaayo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in duqeymahaasi ay geysanayeen Marakiib ay leedahay dowladda Kenya, waxayna sheegeen in ay ku guuldareesteen hadafkii ay ka lahaayeen duqeynta.
Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa saaka ah mid dagan, walow dadku ay hadal hayaan duqeymihii xooganaa ee xalay kusoo dhacayay xaafado katirsan magaalada Kismaayo.